Testimonial-14 - OSC Hospital
မင်္ဂလာပါအန်တီမော်မော်ရေ ။အရင်ဆုံးအန်တီအကြောင်းလေး ပြောပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ အန်တီနာမည်ကတော့ မော်မော်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊ပုလဲမြို့သစ် အမှတ် (၃)လမ်းမကြီးပေါ်မှာနေတာပါ။
OSC ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာပုံလေးပြောပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ?
အန်တီအရင်ဆုံးစပြောပြရရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) ရက်လောက်က အရင်ဆုံး နားကိုက်လာတာက စပြောရမှာပေါ့။နားကိုက်တာ့ နားမှာတစ်ခုတစ်ခု ဖြစ်တယ်ထင်ပြီး အရင်ဆုံး မင်္ဂလာဒုံ ဆေးခန်းတစ်ခုမှာ ပြဖြစ်တယ် ။
(၃)ရက်လောက် နားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နား ၊နှာခေါင်း ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပေမဲ့ မသက်သာပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့မြန်မာအနှိပ်နဲ့နှိပ်တယ်ကြက်ထုတ်တွေဘာတွေ ထိုးကြည့်တယ် ဝေဒနာထူးခြားမလာပါဘူး။ ဆေးရုံမတက်ခင် (၃) ရက်လောက်မှာ ထမင်းနည်းနည်းတော့ စားရသေးတယ်၊ နောက်ရက်တော့ ထမင်းကစားလို့ရပေမဲ့ မျိုချလို့မရတော့ဘူး၊ နောက်ပိုင်း ခေါင်းတွေက ညာဘက်တစ်ခြမ်းလုံးထိုးလာတယ်၊ တတိယည ရောက်တော့ ရေသောက်တာပါ နင်လာတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့မရတော့ဘူးဆိုပြီး ထင်လိုက်တယ် ခေါင်းကလည်း ပိုပြီးထိုးလာခဲ့တယ် စကားပြောလို့တော့ ရသေးတယ် အန်တီရဲ့အမျိုးသားက မနက်ကျရင် ဆေးရုံလိုက်ပြပေးမယ် ပြောတာနဲ့ အိပ်ကြည့်သေးတယ် အိပ်မပျော်ဘဲ နောက်နေ့မနက်ပေါ့ (၂) နာရီလည်း ထိုးကော အမျိုးသားကို နှိုးပြီး ခေါ်ကြည့်တာ လျှာကထုတ်လို့မရတော့ဘူး ညာဘက်တစ်ခြမ်းလုံးလည်း လှုပ်မရတော့ဘူးဖြစ်တာနဲ့ ချက်ချင်းဘဲ အိမ်က ကားနဲ့ဆေးရုံတင်ဖို့အတွက် အမျိုးသား ရယ် အမျိုးတွေနဲ့အတူ အရေးပေါ်ရောက်ခဲ့ရတာပါ။
OSC ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်းပြောပြပေးပါအုံး အန်တီရေ ?
ည (၂)နာရီ သန်းခေါင်ယံ ဖြစ်တာဆိုတော့အရင်ဆုံး တွေဝေနေတာပေါ့လေ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက စကားကလည်းပြောလို့မရ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ဘဲပြောလို့ရတော့ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်တော့ အမျိုးသားက မြောက်ဥက္ကလာ မှာလည်း အကောင်းဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံး ဆေးရုံလည်းဖြစ်တဲ့ OSC ကိုသတိရမိတော့ ဆေးရုံတည်ရှိရာ မယ်လမုဘုရား အနီးကို မောင်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ လေဖြတ်တာတွေ (Stroke) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကုသတာတွေလည်း OSC ရဲ့Facebook Page တွေမှာဖတ်ဖူးထားတော့ ဆေးရုံကို ရောက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချရပြီဆိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိခဲ့တယ်။
အရင်ဆုံး အန်တီအနေနဲ့ Emergency ကို အရင်ရောက်တယ်နောက်တော့အထူးကြပ်မတ်ဆောင် (ICU) အထိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ။
အန်တီအရင်ဆုံး OSC ရဲ့အရေးပေါ်ဌာနကို ရောက်တယ်၊ ပြီးတော့ အန်တီကံကောင်းခဲ့တာဘဲ ပြောရမယ် ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောအထူးကု ဆရာမကြီးကလည်း အန်တီရောက်တဲ့ အချိန်ရှိနေခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့အန်တီကို လွှဲပေးတယ် ဆရာမကြီးဆီရောက်ရောက်ချင်း ဆရာမကြီးက ဆေးသွင်းဖို့အတွက် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်တယ် ပြီးတော့သေချာလေး ရှင်းပြတယ် အန်တီက ဆေးသွင်းဖို့သင့်လျော်တဲ့ လူနာဖြစ်ကြောင်း ဆေးသွင်းလျှင် ၉၄% လူကောင်းပကတိ ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့စတင်ပြီး ဆေးစသွင်းတာပေါ့ ဆေးသွင်းနေတုန်း ဆရာမကြီးက သေချာဘေးကနေ စောင့်ပြီး စကားတွေပြောပေး သတိရမရ စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့အမေးအဖြေတွေ လုပ်တယ်၊ အန်တီအကုန် မှတ်မိတယ် ဆေးသွင်းပြီး တစ်ဝက်လောက်မှ အန်တီစကား မပီတပီစပြောနိုင်လာတယ်။
မနက်ရောက်တော့ အန်တီကိုယ်လည်းလှုပ်လို့ရ၊ စကားလည်းနည်းနည်းပြောလာနိုင်တယ် လျှာလည်းအထုတ်အသွင်း လုပ်လို့ရလာတယ် ညာဘက်တစ်ခြမ်းလုံးလည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်နိုင်လာတယ်။ မနက်ရောက်တော့ ဆရာမကြီးက စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီး ပိုမို ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် (ICU) ကိုပြောင်းခဲ့ရတယ် ။အဲ့မှာဘဲ (၂) ရက်လောက်နေခဲ့ရတယ်။
OSC ဆေးရုံက အန်တီအတွက် ပထမဆုံး အတွေ့ကြုံလား ခင်ဗျာ။
OSCကို ဆေးရုံ ကို ယခုတစ်ကြိမ်နဲ့ဆို (၂)ကြိမ်ရှိပြီပါပြီ။ ပထမတစ်ကြိမ်ကတော့ လက်ကို ခွဲစိတ်ခဲ့ရတာပါ။ လွန်ခဲ့သော (၂)နှစ်ကပေါ့။ အကြောညပ်တာပါ လက်ကောက်ဝတ်ရဲ့ အရွတ်ထဲမှာ အကြောညပ်တာပါ။
တစ်ခြားကော ဘာရောဂါတွေရှိသေးတုန်းဗျ။ ခုလိုဖြစ်ရတာလည်း ဘာကြောင့်လို အန်တီအနေနဲ့ ထင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
တစ်ခြားတော့ဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။ အမြဲလည်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖြစ်တယ်လေ။ အန်တီက လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆိုင် ဖွင့်ထားတယ် ဆိုင်အလုပ်၊ အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့ပြန်ရောက်တာနဲ့အလုပ်တွေပြီးမှ ရေချိုးဖြစ်တာရယ် ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးလုပ်တာဆိုတော့ တစ်ခုတစ်ခုဆိုပစ္စည်းသယ်တာ မတာကအစ ကိုယ်တိုင်လုပ်တာ စိတ်မြန်တယ်လေ အဲ့ဒါလည်းပါတယ် ပြီးတော့ ရေချိုးတာကလည်း အကြာကြီးချိုးနေတာ လည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလို ဖြစ်တာ အန်တီလည်း နောက်ဆိုရင် ဆင်ခြင်ရတော့မယ်။
ဆေးရုံရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောပေးပါအုန်း ခင်ဗျာ။
အဆင်ပြေပါတယ် အန်တီရောက်ရောက်ချင်း အရေးပေါ်မှာ ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေကလည်း အဆင်သင့်ရှိနေတယ်။ပြီးတော့ မြောက်ဥက္ကလာမှာ ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန် (CT) ကလည်း (၂၄) နာရီ OSC ဆေးရုံမှာဘဲ ရှိတာဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ် ချက်ချင်းရိုက်ပြီးတော့ ဆရာမကြီးနဲ့လည်း တစ်ခါတည်း ပြသလို့ရတဲ့အတွက် OSCဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနမှ တာဝန်ရှိ ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေနဲ့အတူ အန်တီကို အခုလို အသက်ဆက်ပေးတဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ အေးမြတ်ငြိမ်းကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ယာယကုထုံးနဲ့ကုသပေးတဲ့ (Physiotherapy) ဌာနကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်နေရာထဲမှာ အစစအရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းဖို့အတွက် အန်တီတို့လို လူနာတွေအတွက် တော့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ အတွက် ဒုတိယထပ်မှာ ရှိတဲ့ (Physiotherapy) ဌာနမှ ဌာနမှူးနဲ့တကွ ဆရာမလေးတွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
တစ်ခြားကော အန်တီအနေနဲ့ခုလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ပြောပြချင်တာလေးရှိရင်ပြောပါအုန်းခင်ဗျာ။
ကိုယ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်း Sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ အန်တီကိုယ်တိုင်လည်း OSC Page ကို ကြည့်ပြီးလေဖြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိခဲ့ဖတ်ခဲ့ရတာကြောင့် တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ ပြန်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ ဆေးရုံ ward ထဲပြန်ရောက်တာနဲ့ အသေးစား လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ စပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ OSC ဆေးရုံ Physiotherapy ဌာနမှာပဲ လေ့ကျင့်ခန်း ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ အန်တီပြောချင်တာကတော့ အန်တီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရင် တစ်နေရာထဲနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနိုင်တဲ့၊ အားလုံး အဆင့်သင့်ရှိနေတဲ့ OSC ဆေးရုံကိုသတိရကြပါ လို့ပြောချင်ပါတယ်။